EA060 - Oti mkpu na-ada ụda olu nke Standalone - OMG Solutions
Ihe Mmetụta EA060 na-enye gị ohere ịnwe mmata nke ọma banyere mmegharị nke ndị bi na-enweghị iji paịlị nrụgide, akwa mmiri ma ọ bụ ngwaọrụ ụdị eriri akpa.
Nhọrọ cementtinye Pụrụ Iche
Enwere ike idowe ihe ngagharị n’akụkụ ihe ndina iji kpachara anya mgbe mmadụ na-achọ ịda n’elu akwa, site n’oche iji mee mkpọtụ mgbe mmadụ na-anwa ibili n’elu oche, ma ọ bụ site n’ọnụ ụzọ iji mee mkpọtụ mgbe mmadụ na-anwa ịpụ mpaghara ahụ. TL-2700 na-arụ ọrụ batrị ma na-eguzo ọtọ na-enweghị enyemaka n'ime ya ihe ntanetị nke 360 ​​Celsius. Gba okirikiri nwere ike ịbụ mgbidi-etinye ya na ngwaike enyere yana ngwa mgbakwunye nkwado nhọrọ dị.
Mpaghara Nchọpụta Niile
Mgbapụ a na-eme mkpọtụ na-enwe ọwa dịgasị iche iche nke na-agbatị karịa 30 ụkwụ site na mkpu. Movementgagharị ọ bụla nke nwere ike ịkwụsị mpaghara a ga - eme ka mkpu wee daa.
-Mgba ọsọ maka akwa, akwa ma ọ bụ ọnụ ụzọ
-Stand-naanị ngagharị ihe mmetụta ihe mkpu
-Ọ nweghị eriri ma ọ bụ eriri chọrọ
-Arụ Batrị arụ ọrụ (1-9 Volt, esighi na ya)
Nzuzo 7932 2 Echiche Taa